Bulshada Dhuusamareeb oo qado sharaf u sameysay Ergooyinka (SAWIRRO) - Jigjiga Online
HomeWararka MaantaBulshada Dhuusamareeb oo qado sharaf u sameysay Ergooyinka (SAWIRRO)
Qaar ka mid ah Ergooyinka lagu wado inay ka qaybgalaan shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha Galmudug oo ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud ayaa maanta qado sharaf loogu sameeyay magaaladaasi.
Kulankan oo mid is barasho ahaa ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa Guddiga shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha Galmudug, oo iyagu dadaal ku bixinaya sidii uu shirweynaha uga furmi lahaa Xarunta Gobolka Galgaduud.
Bulshada ku dhaqan Magaalada Dhuusamareeb oo qado sharafta u sameysay Ergooyinka qaybtooda ku sugan magaaladaasi ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in ay is bartaan.
Ugaas Cabdi Daahir Ugaas Nuur ayaa bulshada reer Galmudug ku booriyay inay ka wada shaqeeyan horumarka deegaanka.
Ugaas C/laahi Ugaas Xaashi Ugaas Faracadde ayaa dadka reer Dhuusamareeb uga mahadceliyay soo dhawayntooda, waxaana uu ku baaqay in reer Galmudug looga baahan yahay inay ka faa’iideystaan fursadda ay maanta haystaan.
Dowladda Somaliya ayaa sheegtay in loo baahan yahay dib u heshiisiin loo sameeyo beelaha degga Galmudug, ka hor inta aanay bulshadu isu diyaarin Doorashada Madaxtinimada Galmudug.